समाचार - के पीई पाइप पिउन योग्य पानी अनुप्रयोगहरूको लागि उपयुक्त छ?
के पीई पाइप पिउन योग्य पानी अनुप्रयोगहरूको लागि उपयुक्त छ?
Polyethylene पाइपलाइन प्रणाली हाम्रो ग्राहकहरु पिउने पानी आपूर्ति को लागी प्रयोग गरीएको छ १ supply introduction० को दशकमा। प्लास्टिक उद्योगले यो सुनिश्चित गर्न ठूलो जिम्मेवारी लिएको छ कि प्रयोग गरिएको उत्पादनहरूले पानीको गुणस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्दछ।
पीई पाइपहरूमा गरिएको परीक्षणको दायराले सामान्यतया स्वाद, गन्ध, पानीको उपस्थिति र जलीय सूक्ष्म जीवहरूको विकासको लागि परीक्षणहरू समेट्छ। यो परम्परागत पाइप सामग्री, जस्तै धातु र सिमेन्ट र सिमेन्ट लाइनर उत्पादनहरू, प्राय जसो यूरोपियन देशहरूमा लागू गरिन्छ भन्दा यो परीक्षणको विस्तृत श्रृंखला हो। यसैले त्यहाँ ठूलो आत्मविश्वास छ कि पीई पाइप धेरै अपरेटिंग सर्तहरूमा पिउने पानी आपूर्तिको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
युरोपका देशहरू बीच प्रयोग हुने राष्ट्रिय नियम र परीक्षण विधिहरूमा केही भिन्नता छ। सबै देशमा पिउने पानीको लागि स्वीकृति दिइयो। निम्न निकायको अनुमोदन अन्य यूरोपीय देशहरू र कहिलेकाँही विश्वव्यापी रूपमा मान्यता दिइन्छ:
बेलायत पेयजल निरीक्षण (DWI)
जर्मनी Deutsche Verein डेस ग्यास-अण्ड वासेरफेचेस (DVGW)
नेदरल्याण्ड्स KIWA NV
फ्रान्स CRECEP केन्द्र डी रीचेर्, d'Expertise एट डी
संयुक्त राज्य अमेरिका नेशनल सेनेटरी फाउन्डेशन (NSF)
PE100 पाइप यौगिकहरू पिउन योग्य पानी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि बनाउनु पर्छ। यसबाहेक, PE100 पाइप या त निलो वा कालो यौगिकबाट निर्मित गर्न सकिन्छ निलो पट्टिहरू सहित यसलाई पिने पानी अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि उपयुक्तको रूपमा पहिचान गर्दछ।
पिउन योग्य पानी प्रयोगको लागि अनुमोदन सम्बन्धी थप जानकारी पाइप निर्माताबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ यदि आवश्यक छ भने।
नियमहरु मिल्दोजुल्दो बनाउन र पिउने पानीको सम्पर्कमा प्रयोग भएको सबै सामग्रीलाई उही तरीकाले व्यवहार गरेको सुनिश्चित गर्न, EAS यूरोपियन स्वीकृति योजना यूरोपियन आयोगको आधारमा विकसित हुँदैछ।
बेलायत पिउने पानी इन्स्पेक्टरेट (DWI)
जर्मनी ड्युश भेरेन डेस ग्यास-अण्ड वासेरफेचेस (डीभीजीडब्ल्यू)
फ्रान्स CRECEP केन्द्र डी रिचेर्, d'Expertise एट डी
संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रिय स्यानेटरी फाउन्डेशन (NSF)
निर्देशक / / / / E / ईसी। यो युरोपियन पानी नियामक, आरजी-सीपीडीडब्ल्यू - नियामक समूहको एक समूह द्वारा निरीक्षण गरीरहेको छ पेयजलको सम्पर्कमा निर्माण उत्पादनका लागि। ईएएस २०० limited मा सीमित रूपमा लागू हुनेछ भन्ने उद्देश्य राखिएको छ, तर यो सम्भावित देखिन्छ कि यो पूरै कार्यान्वयन हुन सक्छ पछिल्लो मिति सम्म जब परीक्षण सामग्री सबै सामग्रीका लागि हुन्छ।
पिउने पानीका लागि प्लास्टिक पाइपहरू प्रत्येक EU सदस्य राज्य द्वारा कडाईका साथ परीक्षण गरिन्छ। कच्चा माल आपूर्तिकर्ता संघ (प्लास्टिक युरोप) ले लामो समयदेखि पिउने पानी अनुप्रयोगहरूको लागि खाद्य सम्पर्क प्लास्टिकको प्रयोगको वकालत गरिसकेको छ किनभने खाद्य सम्पर्क कानूनहरू उपभोक्ताको स्वास्थ्यको रक्षा गर्न र युरोपियन आयोगको वैज्ञानिक समितिको निर्देशन अनुसार विषाक्त मूल्यांकनको प्रयोग गर्न सबैभन्दा कडा छन्। खाद्य को लागी (EU खाद्य मानक एजेन्सी को एक समिति)। डेनमार्क, उदाहरणका लागि, खाद्य सम्पर्क कानून प्रयोग गर्दछ र अतिरिक्त सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्दछ। डेनमार्क खानेपानीको स्तर युरोप मा एक धेरै कडा हो।